तरवार खेल! निन्जा स्लाइस धावक धोखाहरू&ह्याक – Android धोखा दिन्छ
तरवार खेल! निन्जा स्लाइस धावक धोखाहरू&ह्याक
द्वारा प्रशासक | October 31, 2021
आफ्नो ब्लेड तिखार्नुहोस्, तरवार मास्टर! यो वास्तविक शिनोबी साहसिक कार्यमा लाग्ने समय हो!
तलवार प्ले मा स्वागत छ! - एक रमाईलो आर्केड खेल जहाँ तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको ड्यास हो, स्ल्याश & टुक्रा!
सयौं चुनौतीपूर्ण स्तरहरू मार्फत ड्यास गर्नुहोस् र तपाईंका सबै लक्ष्यहरूलाई टुक्रामा काट्नुहोस् जसले तपाईंलाई रोक्न हिम्मत गर्छ।! के तपाइँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ एक साँचो हिट मास्टर हुनुहुन्छ?
समय ढिलो गर्नुहोस् र उड्ने गोलीहरू काट्नुहोस्, विस्फोटक ब्यारेलहरू आधामा टुक्रा पार्नुहोस् र विशाल सुरिसेन्सहरूलाई तपाईंको स्टिकम्यान शत्रुहरूलाई फिर्ता गर्नुहोस्!
गेमप्ले सुपर सरल छ. डमीहरूलाई आधामा काट्नको लागि तपाईलाई फोन स्क्रिन मार्फत स्वाइप गर्नु आवश्यक छ.
मुस्किल स्टिकम्यान शिनोबीको सामना गर्नुहोस्, बन्दुक मालिकहरू र शक्तिशाली मालिकहरू! तितली जस्तै तैरिरहनु पर्छ जब सम्म तिमी आफैलाई काट्न चाहदैनौ. कुनै पनि समुराईलाई स्क्र्याच बनाउन नदिनुहोस्!
संसारमा सबैभन्दा खतरनाक तरवारहरू अनलक गर्न समुराई मिशनहरू पूरा गर्नुहोस्! तपाईंको शस्त्रागारमा इन्फिनिटी ब्लेड समावेश छ, लालसा कटाना, अन्धकारको सेबर, बीट ब्लेड, आर्थर एक्सालिबर, र अन्य महाकाव्य ब्लेड हतियार. ती सबैलाई आफ्नो तरवारको महाशक्तिले कुचल्नुहोस्!
एक स्मार्ट छाया निन्जाले आफ्ना शत्रुहरूलाई हराउन हरेक मौका लिन्छ! विष प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, टुमाहक्स र लेजरहरू पनि सबै स्टिकम्यान विपक्षीहरूलाई स्लाइसिङ स्तरमा तल ल्याउन.
न त पैसा न त वंशले टुक्रा नायक बनाउन सक्छ! एक तरवार समात्नुहोस् र आफ्नो ragdoll दुश्मन देखाउनुहोस् जो वास्तविक ब्लेड मास्टर हो! अब सबैभन्दा स्टाइलिश 3d ब्लेड तरवार खेलहरू मध्ये एक डाउनलोड गर्नुहोस् र ती सबैलाई टुक्रा पार्नुहोस्!
कोटि: धोखा दिन्छ र ह्याक वा सल्लाहहरू ट्यागहरू: CheatsHack, Ninja, खेल्नु, Runner, Slice, तरवार
← पोपी प्लेटाइम खेल – धोखा दिन्छ&ह्याक सूर्य हामीमाथि चम्कन्छ – भिजुअल उपन्यास धोखाहरू&ह्याक →
One thought on “तरवार खेल! निन्जा स्लाइस धावक धोखाहरू&ह्याक”
zortilonrel नोभेम्बर 14, 2021